Francisco Brines. Cervantes Prize 2020. Dzimwe nhetembo | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Royal Spanish Academy
Nyanduri weValencian Francisco Brines agamuchira iyo Cervantes Mubairo 2020, akapihwa zuro. Pazera ramakore makumi masere nemasere, uye mumiriri wekupedzisira weGeneration yema88s, akahwina mubairo wepamusoro-soro mumabhuku echiSpanish. Ichi ndicho chimwe kusarudzwa kwenhetembo akasarudzwa kubva pabasa rake kuti amukudze.
1 Francisco Brines
2.1 Kuda kuenda parwendo rwemotokari
2.2 Iro zhizha rehudiki hwangu
2.3 Ndichaita rudo naani
2.4 Ndichiri hupenyu
Akazvarirwa mukati Oliva muna 1932. Akadzidza Mutemo muDeusto, Valencia neSalamanca uye zvakare Philosophy uye Tsamba muMadrid. Ndezvechizvarwa chechipiri mushure mehondo uye naClaudio Rodríguez naJosé Ángel Valente, pakati pemamwe mazita, vanozivikanwa se Chizvarwa chema50s. Aive muverengi weSpanish Literature mu Cambridge uye Spanish mudzidzisi pa Oxford. Uye kubvira 2001 ndizvo nhengo yeRoyal Spanish Academy.
Pakati pemabasa ake pane Inobatanidza, Mashoko kune rima o Nguva yechando yemaroses. Uye kumwe kuzivikanwa ndiko National Literature Mubairo muna 1987, Mubayiro weNyika weTsamba dzeSpanish muna 1999 uye Mubayiro weReina Sofía weNhetembo in 2010.
Kuda kuenda parwendo rwemotokari
uye grey light rinoyangarara
Mandiri anoda kugara
sokunge ini, pandakamutarisa,
Uye ndiani aripo kunditarisa
uye izvo zvinogona kundiponesa.
Chiedza chashanduka chitema
uye gungwa rakadzimwa.
Iro zhizha rehudiki hwangu
Uye chii change chasara zhizha rekare
Chii chinosara mandiri kubva kune iro chete zhizha rehupenyu hwangu?
Dai ndaigona kusarudza kubva pane zvese zvandakaona
kumwe kunhu, uye nenguva inozvisunga,
boka rake rinoshamisa rinondikwevera ipapo,
uko kufara kwaive chikonzero chechisikigo chekuve mupenyu.
Chiitiko chinogara, sekamuri yakavharwa kubva paudiki;
hakuchina kuyeukwa kwemazuva akateedzana
mune ino kuteedzana kwepakati pemakore.
Nhasi ndinorarama kushaya uku,
uye dambudziko rekunyengera imwe rudzikunuro
izvo zvinondibvumidza kuti ndirambe ndichitarisa pasi
uye nekudaro kuti ndizive pachangu zvakakodzera kurota kwehupenyu.
Yei yaive rombo rakanaka, yenzvimbo iyoyo yemufaro,
gara wakafanana mufananidzo:
vhudzi rake rakafamba nemhepo,
uye akatarira mugungwa.
Inguva iyoyo isina hanya.
Yakasimbiswa mairi, hupenyu.
Ndichaita rudo naani
Mukapu ino yegin ndinonwa
kuoma kwemumhanzi, uye acid
kuchiva kwenyama. Zviripo chete,
uko chando chisipo, kristaro
doro uye kutya kusurukirwa.
Manheru ano hapazovi nemubati
kambani, kana zviratidzo zvekuoneka
kudziya mune chishuwo chinodziya. Kure
imba yangu nhasi, ndichasvika pairi
muchiedza chamangwanani chakasiyiwa,
Ndichafukura muviri wangu, uye mumumvuri
Ini ndinofanira kunyepa neiyo chena nguva.
Nguva yekufara yadzoka. Uye hapana
asi mwenje unowira pamusoro peguta
usati wabva masikati,
kunyarara mumba uye, pasina zvakapfuura
kana ramangwana, ini.
Nyama yangu, yakagara munguva
Uye inochiziva kuita madota, hachisati chatsva
kusvikira kudyiwa kwedota pacharo,
uye ndine rugare nezvose zvandinokanganwa
uye ndinofarira kukanganwa.
Mune runyararo zvakare nezvose zvandaida
uye kuti ndinoda kukanganikwa.
Nguva yekufara yadzoka.
Izvo zvinosvika zvirinani
kuchiteshi chakavhenekerwa chehusiku.
Hupenyu hwakandikomberedza, semakore iwayo
yatove kurasikirwa, nekubwinya kumwe chete
wenyika isingagumi. Rakavezwa rosi
kubva kugungwa, mwenje yakadonha
yemichero, kutinhira kwenjiva
mumhepo, hupenyu hwakandikomberedza,
Nekubwinya kumwe chete, uye nezera maziso,
uye rudo rwakaneta.
Chii chichava tariro? Rarama zvako;
uye rudo, apo moyo wakaneta,
nyika yakatendeka, kunyange ichiparara.
Kuda kurota kwakaputsika kwehupenyu
uye, kunyange zvisingakwanise kuva, usatuke
kunyengera kwekare kwekusingaperi.
Uye chifuva chinonyaradzwa, nekuti chinoziva
kuti nyika inogona kuve yakanaka chokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Makwikwi neMubairo » Francisco Brines. Cervantes 2020 Mubayiro. Dzimwe nhetembo
Niebla, naMiguel de Unamuno
Pablo Nuñez: "Ngaparege kuva nemunhu anomira kuyedza kutsikisa"